byShyam Rana magar - December 13, 2020
यो सपना मैले धेरै चोटी देखि सकें । दोहोरिदैं, तेहेरिदैं मष्तिष्कमा आई रहेकाले यो सपनाको धेरै जसो भाग पनि मलाई कण्ठ भै सक्यो ।
म बडो गजबको ठाउँमा देखिन्छु । वरपर न कुनै बस्ति छ । माथिपट्टी बाक्लो जंगल, जंगल तलपट्टी अलिकति खालि ठाउँ । त्यसको तल्लो पट्टी कलकल पानी बगि रहेको खोला छ । पानी यति सफा छ कि, तलपट्टी ढुंगा, माटो, लेउ सबथोक देख्न सकिन्छ ।
खोला छेउ बसेर म अञ्जुलीमा पानी उभाउँछु । भुँडी चर्किने गरि पानी पिउँछु । एकैछिन ढुंगाकै सिरानी बनाएर निदाउछु ।
उही ठाउँ होइन । तर, ठाउँ उस्तै एकलास छ ।
यहाँ पनि मान्छेको पैतालको डोब कतै देखिन्न ।
एकदमै अग्लो ठाउँ । वरिपरि घना जंगल छ । जंगलको बिचमा अलिकति खालि ठाउँ । म त्यही खालि ठाउँको बिचमा छु । जंगलको बिच ओ बिच हिड्दै जाँदा परै पुगेपछि कुँवा भेटिन्छ । म निकै तिर्खाको छु । खासमा, म पानीको खोजीमै निस्केको हुँ ।
कुँवा छेउ घुँडा टेकेर म मज्जाले पानी पिउछु ।
पानी पिएर फेरि, उही खालि ठाउँ भएको ठाउँमा फर्किन्छु । त्यो खालि चौरमा पल्टेर आकाशलाई आफू भित्र समेट्छु । यत्तिकैमा मेरो निद्रा टुँटी हाल्छ ।
यहाँ म अर्कै संसारमा पुग्ने छु ।
एकदमै निर्जन ठाउँ । पहिलो र दोस्रो सपना जस्तो होइन यो सपना । एकदमै निर्जन ठाउँ । न रुख, विरुवा छ । जताततै आकाश नै आकाश छ । आँखाले हेरेर नसकिने आकाश । यो ठाउँमा म एक्लो उभिएको छु ।
सपना लगभग उस्तै हो । जसले मलाई बारम्बार घचघच्याईं रहन्छ ।
यो ठाउँको खोजीमा निस्कौं जस्तो पनि नलागेको होइन । तर, सपनाको पूरा भाग मैले सम्झन सक्दिनँ ।
यो कस्तो एैठन परेको होला ।
एक्लिएको मात्र देख्छु । जतातै शुन्यता मात्र ।
मलाई यो के भएको ?
खासमा म शुन्य भए की, संसार शुन्य हो ?
म खोजि रहेछु, यस्तै भावहरुमा, ....